Bambaano lagu weeraray guri uu degenaa Mas’uul ka tirsan dowladda – STAR FM SOMALIA
Weerar bambaano ayaa xalay lagu qaaday guri uu degenaa Agaasime ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda oo ku yaal degmada Warta Nabada ee Gobolka Banaadir.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in labo bam gacmeed ayaa lagu tuuray guriga Agaasime ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda oo lagu magacaabo Axmed Shire.
Wararka ayaa sheegaya in illaa labo ruux ay ku dhaawacmeen bam gacmeed, iyadoo bam gacmeedka kaddib la maqlay rasaas.
Ma ahan markii u horeysay ee guriga agaasimahan lagu weeraro bam gacmeed, waxaa la sheegay in horay sidan oo kale weerar bambaano lagu qaaday.
Habeenadii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay dilal qorsheysan ay fulinayeen kooxo hubeysan, waxaana labadii todobaad lagu dilay xaafadaha illaa tobaneeyo ruux.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 12-03-2017